ठोस - एक धेरै लोकप्रिय र साधारण भवन सामाग्री। नयाँ प्रविधि निर्माण, जटिलता र कन्फिगरेसन को storeys को कुनै पनि नम्बर निर्माण गर्न अचम्मको rapidity संग अनुमति दिन्छ। र टास्ने आधार मा यो मिश्रण मा मदत। राख्न गाह्रो ठोस ब्लक गोंद भन्दा समाधान मा। ठोस गर्न ठोस कस र सुरक्षित खण्डमा।
भवन अगाडी परिष्करण लागि सामाग्री को एक किसिम लागू हुन्छ। मा ठोस सतहहरु पनि टाँसन प्रयोग तिनीहरूलाई समाधान गर्न। लाभ स्पष्ट छन्: तिनीहरूले प्रयोग गर्न सजिलो र कम भन्दा कुनै पनि अन्य फास्टनरों साथ र waterproofing प्रयोग गरिन्छ र सबै भन्दा महत्वपूर्ण महंगा छन् - शारीरिक ठोस नष्ट गर्दैन।
बजार मा उपस्थिति धेरै विविध छ र विश्वसनीय टाँसन निर्माण मा नयाँ प्रविधिहरू विकास गर्न योगदान पुग्छ। चाँडै गोंद gazoblokov बनेको घरहरू निर्माण समाधान सामाग्री को तयारी को लागि निर्माण समय र लागत कम गर्न अनुमति दिन्छ।
ठोस गर्न ठोस गोंद के को प्रश्न, प्रमुख समस्या उत्पन्न गर्दैन। निर्माता धेरै टाँसन उत्कृष्ट waterproofing गुण यसलाई तपाईं सही छनौट गर्न अनुमति दिन्छ प्रदान गर्दछ। गोंद प्रयोग "चिसो पुल" जोगिन मद्दत गर्छ। र यो भविष्यमा, माथि 30% गर्न ताप लागत मा आवास को मालिक बचत गर्नुहोस्।
ठोस गर्न ठोस गोंद के बारेमा प्रश्नको जवाफ गर्न, खाता climatic अवस्था मा लिनुपर्छ। यसको विशेषताहरु अनुसार टास्ने मिश्रण तापमान पर्याप्त कम सामना गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूलाई केही मात्र भित्री पर्खाल निर्माण को लागि प्रयोग गरिन्छ।
पर्खाल को सौंदर्य उपस्थिति - अर्को निश्चित प्लस गोंद प्रयोग गर्दा। पछि gazoblokov यसको निर्माण अतिरिक्त परिष्करण आवश्यकता छैन, यो seams व्यावहारिक अदृश्य।
आधारित टाँसन epoxy रेजिन आक्रामक वातावरण, चिस्यान र अन्य प्रतिकूल अवस्था डराएका छैनन्। ठोस गर्न गोंद ठोस भन्दा केरकार कि समान विशेषताहरु संग उत्पादन बिरुवाहरु को निर्माण संग, यसलाई चाँडै हल गर्न सकिन्छ।
फोम संग काम
मात्र भवन के हुन् र संरचना आज फोम अछूता छैनन्! पनि पुरानो, लामो-निर्मित संरचना उत्कृष्ट थर्मल इन्सुलेशन गुण यो हल्का, किफायती सामाग्री संग पृथक गर्न सकिन्छ।
तपाईं ठोस गर्न फोम गोंद अघि वा अन्य कुनै पनि सतह, यो राम्ररी माटो को साफ र आवश्यक भएमा पंक्तिबद्ध गर्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण टास्ने को विकल्प हो।
साधारण र सबै भन्दा विश्वसनीय सार्वभौमिक टास्ने, विशेष फोम लागि विकसित को प्रयोग हो। यो ठोस slabs एउटा सुरक्षित पकड प्रदान गर्दछ। प्रभाव बृद्धि गर्न, विशेषज्ञहरु फोम को सतह मा notches राख्न सल्लाह। सिलेंडर को रूप मा सुविधाजनक प्याकेजिङ्ग गोंद को आर्थिक प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। यो 30 सेन्टीमिटरको दूरी मा स्ट्रिप्स लागू गरिएको छ।
तपाईं पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तरल नङ। ठोस पर्खाल लागि विशेष परिमार्जन लागू हुन्छ।
यो गोंद ब्रान्ड "क्षण" संग रहन, यो प्लेट नाश सिफारिस गरिएको छैन। प्राप्त इन्सुलेशन र प्लास्टर धारण छैन, उनले गिर। ठोस गर्न फोम गोंद के को मुद्दा सम्बोधन गर्न, धेरै ध्यान दिएर नजिक हुनुपर्छ।
कसरी penoplex गोंद गर्न
त्यसैले के ठोस गर्न चिपके penoplex? त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्:
विशेष टास्ने को निर्देशन संग सख्त अनुसार मिश्रित छ; Penoplex हावा, त्यसपछि निश्चित प्लेट को entrapment रोक्न गर्न थाली बैंड लागू, र अतिरिक्त टास्ने हटाइएको छ।
"तरल नङ"। विषाक्तता सुरक्षा बारूद मा काम आवश्यक, यस्तो टास्ने पानी प्रतिरोध र गर्मी प्रतिरोध को उच्च स्तर छ। यो एक घण्टा भित्र कठोर हुन्छ।
विशेष सामाग्री - टास्ने फोम। प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ कि सस्तो उच्च गुणवत्ता सामाग्री, स्थापना भएको प्लेट बीच अंतर प्लग गर्न अनुमति दिन्छ।
सम्बन्ध गाँसिसकेको पोलीट्रीन
चिसो ठोस पर्खाल बलियो, तर कोठामा गर्मी को संरक्षण प्रदान गर्न सक्दैन। यो drawback, पर्खाल इन्सुलेट प्रयोग प्रविधि हटाउन।
विस्तार polystyrene को थर्मल इन्सुलेशन लागि लोकप्रिय सामाग्री मानिन्छ। सजिलो स्थापना यसलाई प्रयोग गर्न आकर्षक बनाउँछ। सहायक निर्धारण हालतमा प्रयोग बिना ठोस गर्न polystyrene माउन्ट क्षमता, तर केवल गोंद को माध्यम ले, एकदम कामहरू को लागत कम गर्छ।
समर्पित र बहुमुखी: गोंद को दुई प्रकार प्रयोग। के गोंद ठोस गर्न पोलीट्रीन, मुख्यतः विविधता र इन्सुलेशन को ग्रेड मा निर्भर गर्दछ। Extruded polystyrene मात्र विशेष गोंद चिपके गर्न सकिन्छ। पूर्ण सार्वभौमिक गोंद अन्य प्रकारको।
टास्ने को सही विकल्प महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई नयाँ घटक को परिचय वा अज्ञात मूल को उत्पादन प्रयोग प्रयोग बोक्न खतरनाक छ। को टास्ने को रासायनिक घटक विस्तार polystyrene आदर आक्रामक हुन सक्छ र बस भंग।
काम सुरु गर्नु अघि, ठोस सतह तयार छ: सफा, plastered र primed।
धेरै सुविधाजनक र सुरक्षित रूपमा मा लिनोलियम समाधान ठोस तल्ला गोंद संग। को लिनोलियम wherein तल्ला कवर प्राप्त हुनेछ ठोस, शीघ्र स्टोर प्रबन्धकहरू, गर्न पेस्ट गर्नुहोस्। निर्माता लिनोलियम गोंद कडा संग किन्न सिफारिस गरिएको छ।
लिनोलियम सामान्यतया मास्टिक संग ठोस मा मिलाएका छौं। यसको लाभ:
तपाईं लिनोलियम को प्रकार अनुसार, गुणस्तर अनुसार सही छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। ऊतक लिनोलियम आधार एक कृत्रिम मास्टिक प्रयोग आधारमा को अभाव मा तितरबितर टास्ने को प्रयोग, आवश्यक छ।
सबै टाँसन को रचनाहरूको waterproofing गुणहरू, स्थायित्व, पानी प्रतिरोध को उत्कृष्ट विशेषताहरु छन्।
पर्यावरण प्रभाव गर्न प्रतिरोधी।
यसको सदस्यहरूलाई साथै, मास्टिक उद्देश्य भिन्न। त्यहाँ उन्नत tackiness र आर्थिक खपत र ठोस सम्बन्ध गाँसिसकेको संग fixation सम्पूर्ण क्षेत्र समान रूप तल्ला लागू गर्नुपर्छ भनेर एक भेट्नुपर्छ गर्नेछ मास्टिक। तह मोटाइ ग्रेड मास्टिक मा निर्भर गर्दछ।
गोंद को विशेष गरी प्रयोग
त्यहाँ टास्ने आधारमा मिश्रण प्रयोग केही nuances छन्। यी समावेश:
सम्बन्ध गाँसिसकेको सतह मिनेट भित्र अनिवार्य fixation;
flammability र तत्संबंधी टास्ने मिश्रण को विषाक्तता;
काम सतह जमीन हुनुपर्छ अघि, साफ र आवश्यक भएमा र गर्भवती प्रक्रिया;
तीव्र उछाल सामाग्री अनुभव र टास्ने सही dosing आवश्यक छ।
प्रवेश धातु ढोका "Buldors": ग्राहक समीक्षा
पर्खालहरु मा कृत्रिम पत्थर। एक भित्तामा कृत्रिम पत्थर को बिछाउने
"Unipack" पेस्ट। विशेषताहरु, उद्देश्य, प्रयोग
कसरी भुइँमा एक टाइल राख्न: सिफारिसहरू
प्लास्टिक प्यानल को स्थापना। जग
सपना साँचो आउन। आफ्नै हातमा लाउने
सुझाव: कसरी steeper बन्न
मेट्रिक थ्रेड: आयामहरू। मेट्र थ्रेड: GOST
दबाइ "Akineton": प्रयोग, वर्णन, समीक्षा लागि निर्देशन
पिट पानी पम्पिंग लागि पंप: विवरण र विनिर्देशों
भान्सा "कल": समीक्षा। भान्सा "कल": मूल्य, विवरण
जीवनी Golubkina लारिसा, प्रतिभाशाली अभिनेत्री
वन उपकरण: प्रकार र सञ्चालन
दृश्य acuity - तपाईं यसको बारेमा थाहा?